» आलु खानुस्, ज्यान घटाउनुुस् !
१६ मंसिर २०७६, सोमबार ०६:२६
मोटोपन घटाउन लागेका मानिस प्रायः आलुदेखि टाढै बस्छन् । आलुले छिटै वजन बढाउने भएकाले वजन घटाउन लागेकालाई आलु नखाने सल्लाह दिइन्छ । तर, मिलाएर खाए आलु वजन बढाउन मात्र होइन, घटाउन पनि उत्तिकै उपयोगी हुन्छ । यो कुनै वैज्ञानिक प्रयोग होइन, ‘पोटेटो डाइट’ प्रयोग गरेर वजन घटाएकाहरुको दाबी हो ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि किन अंकुश लगाउँदै छ मोदी सरकार?
सम्भावित जोखिमप्रति सजग र सतर्क रहन स्थानीय प्रशासनको आग्रह